एमाले–माओवादी पार्टी खारेज, अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । मंगलबार नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता | Saajha Khabar
एमाले–माओवादी पार्टी खारेज, अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । मंगलबार नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता
Posted by Saajha Khabar On February 21, 20180Comment
काठमाडौँ, ७ फागुन / नेपालका दुई ठुला कम्युनिष्ट घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकताको सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको दुई दलको एकता संयोजक समितिको बैठकले नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राख्ने निर्णय गरेको हो ।
दुई दलबाट गठित एकता संयोजन समितिको करिब चार घण्टासम्म चलेको बैठकपछि पार्टी एकताका लागि सात बुँदे सहमतिपत्र हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिपत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित संयोजन समितिका सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि बाहिरिँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले दुईजना अध्यक्ष रहने गरी एकताको सहमति भएको बताए । ‘नयाँ पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष रहने गरी हामीले सहमति जुटाएका छौँ’, उले बैठकपछि पत्रकारहरुसँग भने,’बैठककको अध्यक्षता पनि ओलीजी र मैले पालै पालो गर्नेछौँ ।’
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमतिका ७ बुँदा पढेर सुनाएका थिए। उनले सहमतिका बुँदा वाचन सक्ने बित्तिकै पत्रकारले प्रश्न तेर्स्याए- एकता कहिले गर्ने? आलोपालो नेतृत्वको कुरा के हो ? राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख लगायतको बाँडफाटका विषयमा के भयो? पत्रकारका प्रश्नको जवाफ एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले दिए। उनले भने- ‘हाम्रो बीचमा जे सहमति भएको छ, औपचारिक ढंगमा लिखितरुपमा सार्वजनिक गरेका छौँ। यो समझदारी बाहेक कतिपय कामहरू गर्ने शिलशिलामा भोलि छलफल गर्दै टुंगो गर्दै जानुपर्ने हुन सक्छ। जे समझदारी गरिएको छ जस्ताका तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ।‘
३) ने.क.पा. (एमाले) ले अबलम्वन गरिआएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र)ले अवलम्वन गरि आएको ‘माओवाद र २१ औं शताब्दीमा जनवाद’ सम्बन्धी विषयहरुमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्वयक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने छ ।
Previous: एसपी सिंह भन्छन : अब मोबाइलमा तास खेल्नेलाई समेत कारबाही हुन्छ ( भिडीयो सहित )
Next: “श्रीमती” मेरी श्रीमतीले मलाई साेधिन … अवस्य पढ्नुहोला !